भाइबरको ‘फ्रि कल’ सोमबार सकिँदै « Clickmandu
भाइबरको ‘फ्रि कल’ सोमबार सकिँदै
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७३, बिहीबार १५:४१
काठमाडौं । नेपाली प्रयोगकर्तालाई म्यासेजिङ एप्लिकेसन भाइबरले दिइएको दुई हप्ते ‘फ्रि कल’ अफर सोमबार सकिँदै छ । सेप्टेम्बर ६ देखि सुरू भएको यस्तो अफरमा बेलुका ८ बजे देखि १० बजेको समय सित्तैमा कुरा गर्न मिल्छ ।
भाइबरले यस्तो अफर नेपालबाट नेपाल सहित ५२ वटा देशमा फोन गर्दा मात्र लागु गरेको छ । एउटा कल १० मिनेट भन्दा लामो भने हुँदैन् । फेरी डायल गरेर भने २ घन्टा भित्र जति पनि कुरा गर्न मिल्छ ।
कुन कुन देशमा गर्न मिल्छ?
भाइबरका अनुसार अस्ट्रेलिया, बहराइन, बङ्गलादेश, बेल्जियम, भुटान, ब्रुनाई दारुसलाम, कम्बोडिया, क्यानडा, चीन, सार्ईप्रस, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, हङ्कङ्, भारत, इन्डोनेसिया, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जापान, कुवेत, लावोस, लेबनन्, मकाउ, मलेसिया, नेदरल्याण्ड, न्यूजल्याण्ड, नर्वे, पाकिस्तान, फिलीपिन्स, पोल्याण्ड, पोर्तुगल, कतार, रुस, साउदी अरेयिबा, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलङ्का, स्विडेन, स्विजरल्याण्ड, ताइवान, टाजिकिस्थान, थाइल्याण्ड, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, अमेरिका र भियतनाम यस्तो निशुल्क कल गर्न मिल्छ ।
फोन गर्न के गर्ने?
मोबाइल वा कम्प्युटरको भाइबर एप्लिकेसनबाट भाइबर आउट अप्सन प्रयोग गरी कल गर्नु पर्दछ । यसरी कल गर्न इन्टरनेट भने चाहिन्छ । मोबाइलबाट कल गर्दा डेटा सर्भिस प्रयोग गरे त्यसको शुल्क भने अरू बेलाको जस्तै लाग्छ ।